वडाध्यक्षले ३५ लाखको आरोप लगाएपछि तुलसीपुरका मेयरको यस्तो आयो प्रतिकृया ?
असार १, दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेलाई उनकै वडाध्यक्षले ३५ लाखको आरोप लगाएपछि मेयर पाण्डेले पनि वडा अध्यक्षमाथि प्रत्यारोप लगाएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष डम्मर न्यौपानेले शनिबार विहान पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि वडामा परेको ३५ लाख रुपैँया उपमहानगरपालिकाले नदिएको आरोप लगाएका थिए । राप्ती राजमार्गदेखि पनालीबोटसम्म सडक कालोपत्रे तथा स्तरउन्नतिका लागि छुट्याएको उक्त बजेटको काम नगरले टेण्डर गरेर शुरु गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको उनको अरोप थियो ।
उक्त आरोप आएको केहि समयपछि मेयर पाण्डेले आफुमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठनका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वास्ता नगरेर सम्झौता मिति सकेपछि वडाबासीका विचमा भ्रम छर्न आफुमाथि त्यस्तो आरोप लागेको उनको भनाई छ ।
समयमै सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरी आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि कपोलकल्पित आरोप लगाइएको नगर प्रमुख पाण्डेले बताएका छन । “जुन वडाको विकास गरेपनि नगरकै विकास हुने हो यसमा मैले कुनै राजनीतिक रुपमा हेर्नुपर्ने कुरै छैन” पाण्डेले भने ।
असारे विकास रोक्न जेठ १५ सम्ममात्रै योजना सम्झौता गर्ने उपमहानगरपालिकाको नीति अनुसार बैठकमा ताकेता गर्दा वडाध्यक्षले कुनै मतलव नगरेको उनको प्रत्यारोप छ । वडाले समयमै प्रक्रिया अगाडी नबढाए पनी अर्को बर्ष काम गर्ने गरि उपभोक्ता समिती गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति वडाध्यक्षसंग भइसकेको अवस्थामा एकाएक पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको पनि नगर प्रमुख पाण्डेको आरोप छ ।